Ixabiso eliphantsi leeKholeji ezikwi-Intanethi ngaphandle kweNtlawulo yokufaka iSicelo 2022
Kulabo bafuna isidanga samanye amazwe kodwa abangafuni ukushiya intuthuzelo yelizwe labo, nolu uluhlu lweekholeji zexabiso eliphantsi ezikwi-Intanethi ngaphandle kwemali yokufaka isicelo onokufaka isicelo sokwamkelwa kwaye uqiniseke ngedigri yamanye amazwe ekupheleni kwesifundo sakho .
Yonke into iyenziwa kwi-Intanethi kwezi kholeji kwabo bakhethe inkqubo yabo kwi-Intanethi. Awudingi ukuchitha imali ngenqwelomoya okanye ukhathazeke ngendawo yokuhlala kuba uya kufumana izifundo kanye kwigumbi lakho.
Uninzi lwabafundi bamazwe aphesheya benza iikholeji ezikwi-Intanethi kodwa omnye wocelomngeni abahlangabezana nawo yimirhumo. Uninzi lweekholeji ezikwi-Intanethi okanye kwiiyunivesithi zibiza kakhulu; kubiza kakhulu ukuba ungade ufune ukwenza isigqibo sokuhamba kwaye uthathe ikhosi ngokwasemzimbeni kunokuba uyenze kwi-Intanethi.
Nangona ungalingani ngokufumana isidanga kwi-intanethi ngokwenza njalo ungaxhunyiwe kwi-intanethi. Kukho izibonelelo kunye neziphene kuzo zombini iindlela onokuthi ukhethe kuzo.
Apha, ndifuna ukugxila kwiikholeji ezingabizi kakhulu kwi-intanethi ngaphandle kwemali yesicelo kwaye oku kuya kuba luncedo kakhulu kwabo bafuna ukufumana isidanga sabo kwi-Intanethi ngaphandle kokuphuma kwilizwe labo.
Inye into kukufumana iiyunivesithi ezikwi-intanethi okanye iikholeji kwaye enye into kukufumana ezo zingabizi kwaye enye into kukufumana ezo zingenamrhumo wesicelo!
Iikholeji ezininzi zifuna umrhumo wesicelo ukuhlawula iindleko zokuposa, ukuqhubekeka, kunye nokuphononongwa kweefom zokwamkelwa kodwa bambalwa abangahlawulisiyo.
Kuya kufuneka ufunde ukusika ukugqitha njengekholeji enomdla okanye umfundi waseyunivesithi kuba ushukuma ujongana nomthwalo weefizi xa ekugqibeleni wamkelwa kwaye kufanele ukuba ugcina yonke imali encinci kolu dabi. Ke kutheni uchitha imali eninzi kwizicelo kuphela? Awuqinisekanga nokuba uza kusinikwa na isicelo ekupheleni kosuku.
Ngaba uyazi ukuba kutheni ufanele ukhangele ezo ngaphandle kwemali yokufaka isicelo? Ezinye iikholeji phaya zihlawulisa iifizi zesicelo ezifikelela kwi- $ 100! Esi sisixa esikhulu ukuba awazi. Khawufane ucinge ukuba ufuna kakhulu isidanga esibonelela ngekholeji kwi-intanethi kwaye kwafuneka ufake isicelo seekholeji ezahlukeneyo ze-10 ezihlawula umrhumo wesicelo se- $ 100 nganye; uyakube uchitha i $ 1000 ukuphela kosuku. Leyo yinxalenye enkulu yemali yokufunda.
Ke apha, andizukubeka kuluhlu lweekholeji ze-Intanethi ezingabizi kakhulu kodwa ndiza kuqinisekisa ukuba zezabo ngaphandle kwemali yesicelo ukuze ufake isicelo sezinto ezininzi ezinengqiqo.
Uyazi ukuba ayizizo zonke iiyunivesithi ozifakayo ezizokukwamkela, sesona sizathu sokuba ndikhethe ukuba ufake isicelo seekholeji okanye iidyunivesithi ngaphandle kwentlawulo yokufaka isicelo, ukuba ukuphela kosuku bayasilela ukukunika ungahamba ngobunono ukuya eyunivesithi elandelayo usazi ukuba akukho nto ulahlekileyo.
Njengaleyo ndibhalileyo xa bendibhala kuyo Iiyunivesithi zaseYurophu ezingadingi mali yesicelo, ukuba ukhe uhlawule umrhumo ophakamileyo njenge- $ 50 ukuya kwi- $ 100 yesicelo kwaye iyunivesithi ikuthumela i-imeyile yokwala, i-imeyile iya kujongeka njengenqaku lokuzibulala kuwe; ukwaliwa emva kokuba bexhomile imali yakho. Intlungu.
Inkqubo yeYunivesithi yaseMelika yoLuntu
Isifundo: $ 8,250
IYunivesithi yaseWinley Wesleyan
Ndineeyunivesithi nje ze-5 kolu luhlu kuba kuphando lwam ezi zezona yunivesithi zibiza ixabiso eliphantsi kwi-Intanethi ezaziwayo kwaye kodwa zingabizi mali yesicelo. Zizonke ivulekele abafundi bamanye amazwe ke unokuthatha isigqibo sokufaka isicelo sokwamkelwa kuyo nayiphi na kuzo.
Unokwazi nokujonga amathuba okufundela abawanikelayo okanye nayiphi na inhlangano enikezela abo banomdla wokufunda nasiphi na kwezi zikolo.
Ndiqinisekile ukuba olu luhlu luya kusombulula ingxaki yokufumana iikholeji ze-intanethi ezingabizi kakhulu ngaphandle kwemali yesicelo kwaye ndikunike nomkhondo wokuba iifizi zezifundo zabo zibukeka njani.
Iikholeji ezingabizi kwi-IntanethiIikholeji ze-Intanethi ezingabizi kakhuluIikholeji ze-Intanethi ezingabizi kakhulu ngaphandle kwemali yokufaka isiceloIiyunivesithi ezingabizi kakhulu kwi-Intanethi ngaphandle kwentlawulo yokwenza isiceloiikholejiiikholeji ngaphandle kwemali yokufaka isiceloonlinekwi-degree degreekwiiyunivesithi
Post Previous:Abaphezulu aba-5 abadumileyo phakathi kwaBafundi beHlabathi
Okulandelayo Post:Izixhobo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinokuthi zifunwe ngumfundi onomdla wokufunda phesheya
Pingback: Izifundo zasimahla zeKhompyuter kwi-Intanethi ezinesiQinisekiso
Pingback: IiKholeji ezi-8 ezikwi-Intanethi eziKuhlawulayo ukuba uye ku-2021